दासढुंगा दुर्घटनाबारे चालक लामाको बयान | SouryaOnline
पहिलादेखिनै गाडीको स्टेरिङ बिग्रेको थियो
सौर्य अनलाइन २०७९ जेठ ३ गते १०:०२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । जन नेता मदनभण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय दासढुंगा दुर्घटनामा निधन भएको आज जेठ ३ गते २८ बर्ष पुगेको छ । घटनाका जीवीत साक्षी मदन आश्रित चढेको गाडीका चालक अमर लामाले सरकार द्वारा गठित छानबीन आयोगलाई तत्कालीन अवस्थामा दिएको बयान यस्तो थियो ।
तस्विर किशोर श्रेष्ठको फेसबुकबाट
१. तपाईको नाम, थर, वतनसमेत खुलाई दिनुहोस् ।
मेरो नाम अमरजंग तामाङ। २७ वर्षको भएँ, पेसा मजदुरी। घर तनहुँ भानु गाविस वार्ड नम्बर ८ चामवासमा छ ।
२. आज किन उपस्थित हुनुभयो ?
प्रहरीले यहाँ उपस्थित गराएकोले बयान दिन उपस्थित भएको हुँ ।
३. २०५० साल जेष्ठ ३ गते पोखराबाट नारायणघाटतर्फ आएको बा.अ. च. ८७९२ का पजेरो जीप जुन दासढुंगामा दुर्घटना भयो र त्रिशूली नदीमा खस्यो, त्यो हाक्ने ड्राईभर तपाईं होहोईन ?
४. उक्त पजेरो जीपमा पोखराबाट आउँदा को–को आएका थिए ?
मदन भण्डारी, जीवराज आश्रित, ऋषि कट्टेल र म थियौं ।
५. उक्त जीप पोखराकै हो कि काठमाडौंबाट ल्याएको हो? जीपमा कोको काठमाडौंबाट आएको हो ?
जीप काठमाडौंबाट ल्याएको हो। पहिले नक्सालबाट केशवलाल श्रेष्ठलाई लिएर महाराजगञ्जमा गई वाचस्पति देवकोटालाई लिई पार्टी अफिस बागबजारमा आई पार्टीको सामानहरू उठाई जीवराजलाई लिन डल्लु गएँ। डल्लुबाट अन्दाजी ९ बजे पोखरा प्रस्थान भयौं। उक्त कुरा जेष्ठ १ गतेको हो ।
६. काठमाडौंबाट जीप पोखरामा कुन दिन पुग्यो? तपाईं र जीवराज आश्रित पोखरामा कसको घरमा बस्नुभयो र खाना खानुभयो ?
जेष्ठ १ गते नै पोखरा पुग्यौं। पोखरामा बेलुका वाचस्पति देवकोटाको डेरामा खाना खायौं र सुत्नलाई हरि पाण्डेको घरमा गयौं ।
७. हरि पाण्डेको घरमा कुन कोठामा कोसँग सुत्नु भयो? वा बेग्लै सुत्नु भयो ?
हरि पाण्डेको घरमा १ तलामाथि बाटोको छेउ साइडको कोठामा वाचस्पति र म अलगअलग सुत्यौं। पहिलो दिन एउटै कोठामा र दोश्रो दिन म छुट्टै कोठामा सुतें ।
८. हरि पाण्डेको घरमा आश्रितजी सुत्नु भयो÷सुत्नु भएन, सुतेको भए कुन कोठामा हो ?
उहाँ छुटै कोठामा सुत्नु भयो ।
९. तपाईंले कहिलेबाट उक्त जीप हाक्न थाल्नु भएको हो? जीप पोखरा ल्याउँदा डेन्टिङ पेन्टिङ गरिएको थियो कि ? डेन्टिङ पेन्टिङ गरेको भए कहिले गरिएको थियो ?
०४८ सालको संसदको चुनावपछि सो जीप चलाएको हुँ । दुर्घटना हुनुअगाडि पनि गाडी बनाएको हो । गाडी डेन्टिङ पेन्टिङ बनाउने जिम्मा शैलेन्द्रजंग थापाले लिएको थियो। डेन्टिङ पेन्टिङ गरेको घटना हुनभन्दा ६–७ महिना अगाडि हो। थापाको अर्को नाम भाईहजुर भनिन्छ ।
१०. तपाईंले हाँकेको उक्त जीप कति वर्ष पुरानो हो ? कुनै खराबी पनि थियो कि ?
गाडी अन्दाजी १०–१२ वर्ष पुरानो होला। गाडीको अवस्था स्टेरिङ अलि दायाँ तान्दथ्यो। गाडीको मालिक विश्वबन्धु थापाकोमा रहँदा पनि धेरै चोटि दुर्घटनामा परेको थाहा थियो र सोही बेलादेखि नै सो गाडीको स्टेरिङ बक्सको ’केम’ बिग्रेका थियो भन्ने सुन्नमा आएको थियो। सोही कारणबाट स्टेरिङ केही दायाँ तानिन्थ्यो ।
११. पोखरा आउनुअघि किन मर्मत गराउनु भएन ?
’केम’ फेर्न धेरै चोटि खोजिएको हो। कुनै वर्कसपमा पनि किन्न पाइएन र गाडी बनाउन जिम्मा लिने साथी भाईहजुरले पनि र मिस्त्रीले पनि फेर्न नपर्ने र हाल काम चल्ने भनेको हुँदा सोही अवस्थामा चलाएको हुँ । सोही अवस्थामा त्यसभन्दा पहिले पनि पूर्वपश्चिम धेरै ठाउँमा गएको हो ।
१२.पोखरामा सम्मेलन कति दिन चल्यो ?
सम्मेलन तीन दिन चल्ने हो, जेष्ठ २,३ र ४ तर हामीहरु दुई र तीनको कार्यक्रम सकेर हिँडेको हो ।
१३. पोखरा सम्मेलन हुँदा सम्मेलन भवननिर तपाईंले विदेशीसँग भेटेको र कुरा गर्नुभएको थियो ?
पोखरामा कुनै विदेशीसँग भेटेको छैन । मैले पोखरामा विदेशी भेटेको छु भन्ने कुरा र नक्सा कोरेको भन्ने कुरा असत्य र झुठ हो ।
१४. पुष्पज्योति ढुंगानाले सम्मेलनमा तपाईंले विदेशीलाई भेट्नु र कुरा गर्नुभयो भनेको छ, कसो हो? झुठा पोल गर्नुपर्ने कारण के हो त ?
यदि त्यहाँ मैले त्यसरी कुनै विदेशीसँग भेट हुँदा र त्यस्तो नक्सा कोर्दा उहाँले सोही बेलामा मलाई किन सोध्नुभएन ? उहाँले त्यसो भन्नुको कारण पूर्वाग्रही मनोवृत्ति हुन सक्छ ।
१५ .गणेश बहादुर केसी समेतले सवाल १४ कै कुरा भनेका छन् । उसले पनि त्यसो किन भनेछ ?
त्यसमा पनि मेरो सवाल १४ कै जवाफ हुन्छ ।
१६. तपाईं सम्मेलन स्थलबाट पटकपटक बाहिर जानुभएको थियो÷थिएन? जानु भएको भए सोको कारण के हुन् ?
मैले काठमाडौंबाट पोखरा आउँदा कोरस सांस्कृतिक परिवारबाट गीति क्यासेट ’आशाको किरण’ र ’फूलबारीको कथा, हवाईको व्यथा’नामक क्यासेट चक्का बिक्री गर्न ल्याएको थिएँ। सोही चक्का बिक्री गर्न दायाँबायाँ हिँडेको हुन सक्छ। यसको अलावा चिया खाँदा साथीहरुसँग र गाडी बनाउने क्रममा ब्रेक, ह्यान्ड ब्रेकको तार खोज्ने क्रममा वर्कशपहरूमा गएको हुँ ।
१७. ह्यान्ड ब्रेकको सिलसिलामा हरि पाण्डेसँग सम्पर्क राख्न भनिएको थियो÷थिएन? भनिएको भए सम्पर्क राखी बाहिर जानुभएको हो कि?
यस विषयमा जीवराजजीले कृष्ण थापासँग सम्पर्क राख्न भन्नुभयो र उहाँले नै थापालाई मोटरसाइकलको व्यवस्था गर्नु भई थापाको मोटरसाइकलमा ब्रेकको तार खोज्न र स्टुडियोसम्म गएको हुँ । ह्यान्ड ब्रेकको तार विषयमा हरी पाण्डेसँग कुरा भयो कि भएन मलाई यकिन भएन। थापाको मोटरसाइकलमा अरु नै साथीले हाकेर बाहिर गएको हुँ ।
१८. सम्मेलन सिध्याएर पोखराबाट नारायणघाट भरतपुर आउने समयमा पनि तपाईं समयमा उपस्थित नभई मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई कुराउनु भयो भन्ने छ। कहाँ जानु भएको ?
मदन र जीवराज हलमा बिदा लिन जानुभयो। सो दिन मलाई सामान्य डायरिया भएको थियो। उहाँहरू भित्र जानु भएपछि म दीपेन्द्र सभागृहको दायाँतर्फ रहेको ट्वाइलेटमा गएको थिएँ। म फर्केर आउँदा उहाँहरु निस्किसक्नु भएको रहेछ, सो अवस्थामा त्यसभन्दा बाहिर अन्यत्र गएको छैन् ।
१९. डायरियाले च्यापेको उल्लेख गर्नु भयो तर सोअघि र पछि तपाईंले त्यस्तो उल्लेख नगर्नु र सोसम्बन्धी कुनै औषधि नखानुको कारण के हो ?
सो दिन बिहानदेखि नै मलाई पेटको गडबडी भएको थियो। सामान्य डायरिया भएको कुरा किन भनिरहनु भन्ने लागेर भनिनँ। औषधिको हकमा पाचक र जीवराज कमरेडसँगै भएको तातोपानी खाइरहेको थिएँ ।
२०. पोखरा रहँदा सम्मेलन ताका तपाईंको अन्य स्वास्थ्य कस्तो थियो? पोखरामा रहँदा सम्मेलनताका तपाईंको कसैसंग झगडा/मनमुटाव भएको थियो कि ?
पोखरा रहँदा मेरो अवस्था सामान्य थियो। मेरो कसैसँग झै–झगडा भएको छैन। कसैसँग मनमुटाव पनि थिएन् ।
२१. पोखरा सम्मेलनमा साविक जस्तो स्पष्ट, फुर्तिलो, फरासिलो नभई तपाईं घोसे, कम बोल्ने, अनुहार खसेको थियो भन्ने तपाईंको स्वभाव जाने–बुझेका सोमनाथ अधिकारी समेतको भनाई छ। स्वस्थ हुनुहन्थ्यो भने किन त्यसो भएको ? कुनै षड्यन्त्रको योजनामा सोचविचार हुन गएको कारणबाट भएको होला भन्ने भनाई छ, कसो हो ?
पार्टीले दुर्घटना भएको अवस्थादेखि नै दुर्घटनाको वास्तविकतालाई तथ्यसत्य ढंगले जनसमक्ष ल्याउनेभन्दा पनि पार्टीको राजनैतिक स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि दुर्घटनालाई जसरी हुन्छ, षड्यन्त्रमा परिणत गर्न लागिप¥यो। यसैको नतिजाको उपज हो साथीहरूको पूर्वाग्रही चिन्तन ।
नेकपा (एमाले) पनि संसदमा जिम्मेवार विपक्षमा रहेको पार्टी हो। कुनै पनि राजनैतिक पार्टीलाई र त्यसमा पनि अझ विपक्षी पार्टीलाई सरकार र विपक्षीको विरोधमा जान विविध राजनैतिक हतियार चाहिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि संसदको चौथो अधिवेशनसम्म कर्मचारी आन्दोलन र टनकपुर काण्डलाई लिन सकिन्छ। दासढुंगाको दुर्घटना भएको केही समयपछि संसदको पाचौँ अधिवेशन बस्दै थियो। सो अवस्थासम्म कर्मचारी आन्दोलन र टनकपुर काण्ड बासी भइसकेको थियो। यसै कारण एमालेलाई पनि ताजा राजनैतिक मुद्दा चाहिएको थियो। त्यसैकारण सोही दासढुंगा दुर्घटनालाई व्यापक राजनीतिकरण गर्न पार्टी लागी प¥यो। यही निर्देशन आम पार्टी कार्यकर्ताहरूमा पनि फैलिएको हुँदा आम कार्यकर्ताहरूले पार्टीको निर्देशन मान्न माथि भनिए जस्तो पूर्वाग्रही ढंगले लागेको हुनुपर्छ।
त्यसपछि गाडीमा आउनुभएको कट्टेल गोरखा जानुपर्ने हुँदा आँबुखैरेनीमा झारी हामी नारायणघाटतर्फ प्रस्थान गर्ने समयमा मुग्लिङदेखि अन्दाजी १ किलोमिटर यता नारायणघाटतर्फको पछि थाहा पाएअनुसारको स्याउलीबजारमा गाडी रोकी मदन र मैले चिया पिएको हौं। जीवराजलाई अल्सर भएको हुँदा उहाँले चिया पिउनुभएन। चिया पिएपछि हामी पुनःनारायणघाटतर्फ लाग्यौँ।
सो दिन पोखरादेखि आउँदा नै भीषण पानी परिरहेको थियो। हामीले चिया खाने ठाउँसम्म पनि सोभन्दा यताको सडकमा पनि पानी पर्न रोकिएको थिएन। सोही पानीको कारण गाडीको सिसामा भित्रपट्टि बाफ बस्ने गर्दथ्यो। दुर्घटनास्थल आइपुग्दा पनि सोही बाफ सिसामा लागिरहँदा मैले आफ्नो अगाडि डेस्कबोर्डमा रहेको रुमालले बायाँ हातले अगाडि सिसाको बाफ आफ्नो र मदन कमरेड अगाडि बाफ पुछ्ने क्रममा गाडी केही दायाँ साइडमा गएको देखेँ । झस्याङ्ग भएर गाडीलाई सन्तुलनमा ल्याउन बाँया काटेँ। बायाँ काटेपछि बढी मात्रामा बायाँ काटियो। त्यसपछि गाडी बायाँ बढी काटिएपछि पुनः साइडमा ल्याउन दायाँ काटेँ। गाडी सन्तुलनमा नआई एक्कासी छेउतर्फ हान्निएर गएपछि पुनः सन्तुलनमा ल्याउन बायाँ काटेँ। बायाँ काट्दा गाडी एक्कासी भित्तातर्फ मुख भएर पछाडिको भाग थुम्को छेउतर्फ घुम्यो । त्यसपछि गाडी भित्तातर्फ बत्तियो, म आत्तिएँ। ठोकिएला भनी दायाँ काटेँ। दायाँ काट्दा जति साइडमा आउनु पर्ने हो त्यो नआई हान्निएर भीरतिर गाडी खस्यो। खस्नु अगाडि गाडी असन्तुलित हुँदा मदनले ’के भो? के भो?’ भनेर सोध्नुभएको थियो ।
गाडीलाई सन्तुलनमा ल्याउन लागिरहेको र आफैँपनि निकै आत्तिएको हुँदा उहाँलाई कुनै जवाफ दिन नपाउँदै गाडी भीरतर्फ खस्यो, जब गाडी भीरतर्फ खसेपछि नदी र सडकछेउको बीच भागनिर एउटा ढिस्कोमा गाडीको मुख बजारियो। गाडी भीरतर्फ खसेपछि मैले आफ्नो साइडको ढोकाको लकमा खोल्न हात के पाएको थिएँ, गाडी बज्रिना साथसाथै म पनि भूईमा खसें । खसेपछि गुल्टिदै तल पाखा बगरमा पुगेँ। बगरमा पुगी कमरेडहरु कतै हाम फाल्नु भएको छ कि भनी र गाडी कतै अड्कियो कि भनी दायाँबायाँ हेरेँ, कतै केही थिएन। पछि कमरेड मदनको ब्रिफकेस र मेरो झोला पानीबाट निस्कियो ।
शरीरको कुनै अंग भनेको हुँ। त्यस क्रममा सो अंग हात वा कुनै पनि हुन सक्छ। पानीमा डुब्दा प्राय मानिसको हात खुट्टा चल्छ। सो क्रममा पनि मदनको हात या खुट्टाका कुनै अंग हुनु पर्दछ भनी अनुमानमा मैले भनेको हुँ ।
२६. देखिएको कुरा सोधिएको हो। वस्तुतः तपाईंले कुन कुरा देखेको हो प्रष्ट भन्नुहोस् ।
शरीरको कुनै अंग अवश्य हो तर त्यो हात वा खुट्टा कुनै पनि हुन सक्दछ। यही भाग हो भनेर मलाई यकिन भएन ।
२७. तपाईंले चितवन जिल्ला अदालतमा र यहाँ ’गाडी भीरतर्फ खसेपछि ढोका खोल्न हात के पु¥याएको थिएँ गाडी बज्रिनको साथसाथै म पनि भूईमा खसें’ भन्ने र प्रहरी कार्यालयमा बयान गाडाबाट हाम फालेँ भन्ने। अनिल आयोगमा गाडीबाट फालिएर झरेँ भन्नु भयो। अदालतमा बयान गर्दा ’एउटा पहरा जस्तो ठाउँमा पुग्दा गाडी घोप्टो नै भयो, मैले ढोका खोली हामफाल्न नपाउँदै खसेँ’ भन्नुभयो। कतै के र कतै के भन्नु भएकोले कुन साँचो हो? बयान किन फरक फरक भएको छ ?
भनाइहरु फरक फरक भए पनि भन्न लागेको आशय एउटै हो। जुन थुम्कोको कुरा छ मैले यस आयोगलाई बीच भाग भनेको हुँ। सो थुम्को बीच भागमा नै पर्ने हुँदा सोही थुम्कोमा गाडी बज्रिदा गाडी बज्रिनु र म भुईंमा खस्नु एकै पटक भएको हुनु पर्दछ। भनाईमा प्रक्रियागत त्रुटी भएको हुन सक्छ, बयान अलगअलग दिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
२८. आफैं हाम्फाल्ने र खस्ने शब्दलाई कसरी एउटै कुराको बोध गराएको मान्ने ?
२९. तपाईंले पानीमा देखेको हातखुट्टा वा अंग मदन भण्डारीको भन्नुभयो, त्यो कसरी निश्चित गरेर भन्नुभयो ?
त्यो दुर्घटना भएको भोलिपल्ट गाडीमा निकालेको हो भन्ने थाहा पाएँ। यस्ले गर्दा पानीमा देखिएको अंग मदनको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
३०. आँबुखैरेनीमा आइपुग्दा समय कति भएको थियो? स्याउलीबजारको चिया दोकानमा कति बजे आई कतिबेर रोकिनु भयो? दुर्घटनाको बेला कति समय भएको होला ?
आँबुखैरेनीमा आइपुग्दा अन्दाजी ३/३ः३० बजेको हुनु पर्छ। स्याउलीबजारमा चिया खाँदा अन्दाजी ४÷४ः३० बजेको हुनु पर्दछ। दुर्घटना हुँदा ५ः३० देखि ६ बजेभित्रमा भएको हुनु पर्दछ ।
३१. तपाईंले टेलिफोनमा कुरा गर्दा लेखनाथ कोइरालाले के जवाफ दिनुभयो ?
दुर्घटनाको जानकारी गराएपछि उहाँले कमरेडहरुको विषयमा सोध्नुभयो र मैले कमरेडहरू पनि सोही गाडीमा पर्नुभएको छ भनेँ ।
३२. तपाईंले सडकको भौगोलिक बनावटले दुर्घटना भएको भन्नुभयो त्यो के हो ?
सो दुर्घटनास्थल केही सामान्य घुम्ती, केही भिरालो भएको हुँदा मैले अव्यवस्थित बनावट भनेको हो ।
३३. मौसमको प्रतिकूलता छ भन्नुभयो त्यस्तोमा किन सफर गर्न भएको हो? दुबै नेतालाई सल्लाह दिनुभएन ?
सो दिन चितवन आइपुग्नुपर्ने काम हुँदा नेताहरुको निर्देशनलाई शिरोपर गरी जिम्मेवारी निभाएको हुँ। यसभन्दा अगाडि पनि सफर हुँदा कतै पानी पर्ने गर्दथ्यो। पानीकै कारणबाट पार्टी कार्यक्रम नरोकिने भएकाले मैले आदेशको पालना गरेको हुँ। चितवन आइपुग्नुपर्ने कारण भएको हुँदा उल्टो नेताहरुलाई सल्लाह दिन अस्वाभाविक हुन्थ्यो ।
३४. दुर्घटना हुँदा गाडीको स्पिड कति थियो ? कुन गियरमा मोटर हाक्नु भएको र दुर्घटना हुने अवस्थामा मोटरको गियर कुन नम्बरमा थियो ? गियरले गाडीको रफ्तारलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ/मिल्दैन? तपाईंले के गर्नु भयो ?
हामी पोखराबाट नारायणघाटतर्फ आउँदा अन्दाजी गाडीको स्पीड ५०–६० थियो होला । पजेरो जीप र एउटा कन्डिसनमा रहेको गाडीको हकमा ५०–६० स्पिड सामान्य अवस्थामा रहन्छ। दुर्घटना हुँदा गाडी ४ नम्बर गियरमा थियो र गाडीको गियरबाट पनि गाडीको स्पीड घटाउन बढाउन मिल्छ । दुर्घटना हुने बेलामा पनि अन्दाजी ५०–६० कै स्पीडमा थियो होला ।
३५. तपाईंले स्टेरिङको केम खराब भएको भन्नुभयो। २०५०–२–६ गतेको मेकानिकल जाँचको प्रतिवेदनमा स्टेरिङसमेत ठीक छ भन्ने छ। मोटर दुर्घटना कसरी भयो र उक्त रिपोर्ट अनुसार गाडीको गियर १ नम्बरमा (मेन) ट्रान्समिसन गियर न्युट्रलमा भएको अवस्थामा गाडी ओरालोमा गुड्छ÷गुड्दैन? गुड्छ भने त्यो अवस्थामा गियर किन देखिए ?
दुर्घटनाको मुख्य कारण स्टेरिङको कारणले भन्ने भनाई मेरो होइन। स्टेरिङ बक्सको ’केम’ को सम्बन्धमा मैले सो गाडी हाँक्दाखेरि शैलेन्द्रजंग थापालाई जसले गाडी जिम्मा लिनुभएको थियो। उहाँलाई गाडी किन दायाँतिर तानिन्छ भनी सोध्दा उहाँले नै गाडी दायाँ तान्नको कारण स्टेरिङ बक्सको ’केम’ बिग्रेको छ भन्नुभएको थियो। यसै कारणबाट भएको होला भनी मैले बयानमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेको हुँ। मेन गियर १ नम्बरमा र ट्रान्समिसन गियर न्यूट्रलमा कसरी गयो त्यो मलाई थाहा छैन। मैले सो गियरलाई अन्यथा ढंगले चलाउन पर्ने कारण पनि छैन ।
जहाँसम्म मेरो विचारमा गियर चेन्ज भएकोमा गाडी तानेर टुचेनले निकाल्दा र आर्मीले पौडी खेली गाडीभित्र गई एकजना व्यक्तिको लास छ भनी पत्ता लगाएको थियो रे। सो अवस्थामा निज पौडीबाज आर्मीको धक्काबाट वा गाडी दुर्घटना भएपछि हामी ३ जनामध्ये कसैको धक्काबाट अथवा कमरेड मदन निस्कँदा वा कमरेड जीवराज चल्नु भएको अवस्थामा सो गियर लिभरमा धक्का लागी उक्त गियर लिभर चेन्ज भएको होला भन्ने मेरो धारणा छ। पजेरो जीपको गियर लिभर अत्यन्तै नरम अवस्थामा रहन्छ, जसलाई हामी सामान्य धक्काबाट पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। मेन गियर १ नम्बरमा वा कुनै पनि गियरमा रहँदा ट्रान्समिसन गियर न्युट्रल भयो भने गाडी गुड्न सक्दछ ।
३६. घटना हुनुअघि ब्रेक लगाउनु भयो/भएन? ब्रेक लगाएको गाडी रोकिन्थ्यो रोकिँदैन थियो? नलागाएको भए कारण के हो? गाडी दायाँ बायाँ गएकै अवस्थामा ब्रेक लगाएको भए के हुन्थ्यो? बेक नलगाउनुको कारण पनि छ कि? सबै भन्नहोस् ।
ब्रेकको सवालमा गाडी दायाँबायाँ हुँदा त्यसमाथि पनि पानी परेको र ओरालो ठाउँमा इमरजेन्सी ब्रेक लगाउँदा झन् खतरा हुने हुँदा मैले इमरजेन्सी ब्रेक लगाइनँ तर ब्रेक पम्प गरेको हुँ। सो अवस्थामा पनि गाडी सन्तुलनमा आएको थिएन। मलाई याद भएसम्म ब्रेक पम्प गरेको हुँ, तर बक प्याडल सारो भए जस्तो लाग्छ। उक्त सारो हुनुको कारण डाईभर सिटमनि ओटको रुपमा प्रयोग हुने काठको टुक्रा राखेको थिएँ। सो काठको टुक्रा शैलेन्द्रजंग थापाले दिइपठाउनु भएको हो। उक्त दर्घटना हुने अवस्थामा ओरालो र गाडी घच्याकघुचुक हुँदा सो काठको टुक्रा गुडेर ब्रेक प्याडल मनि परेको हुन सक्छ। यसै कारणबाट सो ब्रेक साह्रो भएको हुन सक्छ भन्ने मेरो भनाई छ। सो अवस्थामा म असन्तुलित गाडीको कारणबाट धेरै आत्तिएको थिएँ। यसै कारणबाट के कसो भएको हो सबै यकिन भएन ।
३७. समथल सडकमा मोटर दायाँबायाँ भएको देखिन्छ, त्यहाँ ब्रेक लगाउन के अप्ठेरो प¥यो? ओटको लम्बाई चौडाई मोटाई समेत कति थियो? सबै भन्नुहोस् ।
३८. घटनास्थलमा गियरको घटबढले स्पीड कन्ट्रोल हुन्छ भने त्यहाँ गियरलाई घटी स्पीडमा ल्याउन किन प्रयोग गरिएन ?
यसको जवाफ त्यस्तो व्यक्तिलाई थाहा हुन्छ जो स्वयम् त्यस्तो अवस्थामा परेको छ। उक्त असन्तुलित अवस्थामा मैले गियरलाई चेन्ज गर्न पाइनँ। गियर चेन्ज गर्न नपाउँदै गाडी भीरतर्फ दुर्घटना भयो ।
३९. गाडी नदीमा खस्ने भएपछि तपाईंले मदन र जीवराजलाई सतर्क गराउनु भयो÷भएन? उहाँहरुलाई हाम्फाल्न भन्नु भयो÷भएन? सर्तक नगराएको र हाम फाल्न नभनेको भए किन भनिएन? जिल्ला अदालत समेतको मिसिलबाट तपाई पौडी खेल्ने मानिस देखिन्छ, नदीमा खसेपछि र मदन भण्डारीको जीउ हो भन्ने लागेपछि तपाईंले पौडी खेली बचाउने किन प्रयास गर्नु भएन?
सर्वप्रथम उक्त पानीमा देखिएको अंग मदन भण्डारीको हो भन्ने मलाई तत्काल नभई पछि थाहा लागेको हो। जहाँसम्म पौडी खेली बचाउन प्रयास किन गरिएन भन्ने सम्बन्धमा मेरो भनाई– जो कसैले पनि सबैभन्दा पहिले आफैँलाई बचाउने प्रयास गर्दछ त्यो चाहे जतिसकै आत्मीय व्यक्तिले नै किन नहोस्। यो जन्मसिद्ध र मानवीय देन हो। बचाउने सवालमा सो अवस्थामा म एक्लैले ठोस उद्धार गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर पनि जति सके चाँडो उद्धारको लागि मानिसहरुलाई हारगुहार गर्न पार्टी अफिसमा सूचना गर्ने, प्रहरीलाई सूचना गर्ने प्राथमिक काम गरेकै हो। जहाँसम्म नेताहरुलाई हाम फाल्न सतर्कताको विषय छ, दुर्भाग्य भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन। सो ढंगले दुघटना हुने मलाई थाहा भएको भए अवश्य सचेत गराउने थिएँ। हाम फाल्न नलगाएको सवालमा बाद मैले कमरेडद्वयलाई दर्घटना हुन अगावै हाम फाल्न लगाई उहाँहरुलाई केही भै यदि गाडी सन्तुलनमा आएको भए के हने थियो? के भनिने थियो त्यसलाई? र सचेत नगराउने र हाम फाल्न नलगाउने भन्ने विषयमा तत्काल भन्न सकिने अवस्था थिएन ।
४०. गाडी सडकमुनि गुडिरहेको थियो, तपाई हाम्फाल्नु भयो, मदन भण्डारी र जीवराज किन हामफाल्न नसक्ने? भन्नुहोस् ।
आज गरेको बयान पढेँ, सुनेँ। मैले भने बमोजिम लेखिएको ठीक छ। भोलि पुनः १० बजे उपस्थित हुनेछ।
इति सम्वत् २०५१ साल श्रावण २८ गते रोज ६ ।
२०५१–४–३० मा बाँकी बयान
४२. जवाफ २८ मा हामफाल्न नपाउँदै खसेको भन्नुभयो, जवाफ २४ मा ढोकाको लक खोल्न के हात बढाएको थिएँ मोटरबाट खसेँ भन्नु भयो। नागरिक छानबिन समितिमा माथि हामफाली भन्नु भयो। तपाईंको गाडीको तपाई बस्नु भएको ढोकापटिको लक खुला छ। अरु लक बन्द छ, लकको सिस्टम कस्तो छ? तपाईपट्टिको लक खुलेपछि सबै लक खुल्छ÷खुल्दैन? मोटर खसेपछि मानिस झिक्ने तर्फ हारगुहार नगरी हतारहतार नारायणघाटतर्फ आउनु भएको कारण के हो ?
सबभन्दा पहिला प्रश्नमा श्रीमानबाट नागरिक छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा संलग्न रहेको सवाललाई उठाउनु भएको छ। श्रीमानबाटै जाहेर भइसकेको छ कि सो आयोग व्यक्तिगत आयोग थियो। सो आयोगलाई मेरो शब्दमा परिभाषित गर्ने हो भने सो आयोगका सम्मानित सदस्यज्यू पनि यसै आयोगमा संलग्न रहनु भएको हुँदा म शब्दको लागि माफी चाहन्छु। कथित नागरिक छानबिन आयोगलाई मैले स्वतन्त्र र निष्पक्षभन्दा पनि राजनैतिक वेश्यावृत्तिप्रति उद्यत रहेको मैले पाएँ ।
कथित नागरिक छानबिन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्षताको नाममा व्यक्ति, पार्टी, संस्था अनि उपचुनावको मसलाको रुपमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन ल्याएको मैले पाएँ। यो कुराको पुष्टि यहाँबाट पनि हुन्छ कि छानबिन सकेको ८ महिना पश्चात् उम्मेदवारी नाम दर्ता गर्ने दिनको एक दिन अगाडि पौष १५ गते ल्याउनुले पनि स्पष्ट हुन्छ। जहाँसम्म हाम फालेको÷खसेको सवाल छ त्यसमा मैले माथि पनि भनिसकेको छु– आफू तयारीसाथ हामफाल्न नभ्याउदै गाडीको बज्रबाट मलाई हुत्याएको हुन सक्छ। उक्त अवस्थाको संकटकालीन स्थितिमा म आफै पनि कसरी बाँच्न पुगें मलाई आफैलाई आश्चर्य लाग्यो।
जहाँसम्म ढोकाको लकको सवाल छ, सो लक अटोमेटिक लक नभइकन अथवा सो गाडीको सम्पर्ण लक सिस्टम चालकद्वारा संचालित नभई प्रत्येक साईडमा बस्ने व्यक्तिमाथि नै भर पर्दछ। जहाँसम्म उद्धार कार्यमा नलागी हतारहतारमा भरतपुरतर्फ आएको भन्ने सवाल छ। त्यसको जवाफ माथि पनि दिइसकेको छु– कि दुर्घटनास्थलमा हारगुहार गर्ने, रुनेकराउने संलग्न रहेको व्यक्तिसँग सबै कामहरु भएकै हो। यहाँसम्म कि आध्यात्मिक दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि मैले भगवानलाई समेत गुहार मागेको छु। भरतपुरतर्फ आएको सवालमा सो स्थलमा ठोस उद्धार त के कृत्रिम उद्धार पनि नदेखिएको हुँदा पार्टीलाई र प्रहरीलाई जतिसक्यो चाँडो खबर गर्दा चाँडो उद्धार होला भनी खबर गर्न आएको हुँ। यहाँनिर मेरो एउटा प्रश्न छ, यदि म जतिसक्दो चाँडो पार्टी र प्रहरीलाई खबर गर्न नआई दर्घटनास्थलमा नै बसिरहेको भए किन चाँडै नै पार्टी र प्रहरीलाई खबर गर्न गइनस् भनी प्रश्न उठ्थेन र?
४३. जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत सरकारी वकिलले २०५० साल आषाढ ९ गते टुङ्गाइएको बयानमा गाडीको ढोका खोल्ने तानी म गाडीबाट हाम्फालेँ, म हाम्फाल्ने बित्तिकै केही तल थुम्कोमा गाडीको मुख जोतिन पुग्यो भन्नभयो। यहाँ गाडी ढिस्कोमा बज्रियो म खसें भन्नु भयो के हो त ? खुलाउनु होस् ।
गाडी जब पिच छाडी भीरतर्फ दुर्घटना भयो त्यसपछि मलाई दर्घटना भयो भन्ने निश्चित भयो। त्यसै क्रममा मैले आफूलाई बचाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक थियो। यस क्रममा मैले ढोका खोल्ने प्रयत्न स्वरुप ढोकाका कब्जामा हात पुर्याउने, गाडी बज्रिनु र म खस्नु एकैचोटि भएको हुनुपर्छ। सो वस्थामा गाडी पूरा घोप्टो परेको हुँदा मेरै हातको दवावबाट कब्जामा धक्का लागी (कब्जा उघ्री) टोका घोप्टिन गै उक्त ढोका मेरो हातको दबाबबाट भन्दा पनि घोप्टो अवस्थामा रहेको गाडीकोका आफ्नै भारले उघ्रिएको भन्ने मेरो अनुमान छ । बत्तिएर आएको गाडी बत्तिएको बेगले म खस्नु, सँगसँगै झर्याम्म भएको आवाज आएको हुँदा मेरो अनुमानमा सो समयमा म खस्नु र गाडी बजिनु एकैसाथ भएको भन्ने मेरो अनुमान छ ।
प्रहरी बयानमा भने बमोजिम आफू तयारीसाथ नहाम्फाली गाडीको असन्तुलित अवस्थामा खसेको कुरा मैले बयानमा भने जस्तो लाग्छ। तात्कालीन समयमा अन्योल र भ्रमहरु श्रृजना भैरहेको, आफू १८ दिनको अस्पतालको भर्ना पश्चात् भर्खर डिस्चार्ज भएतापनि शारीरिक, मानसिक असन्तुलनहरु हनु स्वाभाविकै थियो। भनाईका व्यहोराहरु लेखाईको प्रक्रियामा त्रुटीहरु भए होलान्। सो दुर्घटना भएको वेलाको संकटकालीन घडीमा मैले के गरेँ के गरिनँ सबै कुरा एकिन भएको छैन। जहाँसम्म मलाई लाग्छ म बच्नुको कारण माथि भने बमोजिम हुन सक्छ । मैले माथि पनि भनिसकेँ यस्तो अवस्थाको ठोस जवाफ स्वयम् त्यस्ता अवस्थामा परेकाहरुले दिन सक्नेछन् अथवा थाहा हुनेछ ।
जहाँसम्म प्रहरी बयानमा हाम्फालेको हो भन्ने सवाल छ मेरो माथिका कुराहरु राख्दा पार्टीका स्थायी समितिका सदस्य केपी ओलीजीले वीर हस्पिटलमा तपाईका भनाईहरु सुन्दा तपाई हामफाल्नु भएको हो अनिल आयोग पनि आउँछन् हाम्फाल्नु भएकै हो भन्नु भए हुन्छ। प्रहरीमा पनि यही प्रश्न आउँदा सोही निर्देशन अनुरुप सहमति जनाएको हुन सक्छ ।
४४. मुग्लिङबाट वा सुनकोशी होटलबाट घटनास्थल नपुग्नेज्यालसम्म तपाईको मोटरको अघिपछि कुनै कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकल आएको थियो/थिएन ? सुनकोशी होटल र दासढुंगाको बीच आफ्नो मोटर कतै रोक्नु भयो÷भएन? दुर्घटनास्थलमा कुनै ट्रकलाई पास हुन दिन साइड लाइट दिई आफ्नो मोटरको रफ्तार कम गर्नु भएको थियो कि ? भन्नुहोस् ।
मुग्लिङदेखि यता दुर्घटनास्थलसम्म चिया खान सुनकोशी होटलमा बाहेक अन्य कतै रोकिएको छैन। बीचमा मैले एउटा ट्रकलाई ओभरटेक गरेको थाहा छ। यत्रतत्र सडकमा आउने गाडीहरु भेटिरहन्थ्यो, को के कसो हो थाहा भएन। दुर्घटनास्थलमा मैले रफ्तार कम गरी प्रश्नमा भने जस्तो कुनै गाडीलाई साइड दिएको थाहा छैन। मैले ट्रकलाई ओभरटेक गरेको ठाउँ सुनकोशी होटल र दुर्घटनास्थलको बीचमा पर्दछ, ठाउँको नाम थाहा भएन ।
४५. नागरिक छानबिन समितिले ना.अ.ख. ६२० नं. ट्रकको खलासीले खस्ने गाडी पहिले अगाडि थियो, साइड दियो, डाईभर फुत्त हामफाल्यो भन्ने सम्पूर्ण कुरा तपाईलाई सुनाइन्छ। सोतर्फ तपाईको भनाई के छ ?
पहिलो कुरा नागरिक छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले आफ्नो प्रतिवेदनमा षड्यन्त्र र सुनियोजितताको कुरा उठाए पनि स्पष्ट रुपमा उस्ले प्रमाण ल्याउन सकेको छैन। सिंगो प्रतिवेदन अनुमान र हचुवाको भरमा प्रत्येक बुँदाहरुमा सम्भावनाहरु हुन सक्छ, भयो होला, भन्ने किसिमका प्रश्नवाचक र प्रश्नवाचक नै खडा भएर आएको छ। मैले माथि पनि भनिसकेँ– कथित नागरिक छानबिन आयोग राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि मात्र थियो ।
जहाँसम्म ना.अ.ख. ६२० नं. ट्रकको खलासीको सवाल छ, सो सरासर गलत र झुठा हो। दुर्घटना हुने समयमा तत्काल त्यहाँ त्यस्तो कुनै ट्रक आएको थिएन। यो कुरा अनुमानित रुपमा छ। यस्को पुष्टि यहाँबाट पनि हुन्छ कि गाडी खसेको देख्नु, चालक हाम्फालेको देख्नु, टाउको खसेर उत्तानो परेको देख्नु, तर गाडीमा अंकित रहको डेढ मिटरको झण्डा नदेख्नु, यस्ले गर्दा यो कुरा आफैमा असत्य छ। तर म माथि आएपछि दुर्घटना भएको ५÷७ मिनेटपछि मात्र त्यहाँ एउटा ट्रक आएको छ। ५÷७ मिनेट पछि आएको खलासीले अगाडि भएको दर्घटना कसरी देख्न सक्छ? ५÷७ मिनेट पछि आएको ट्रकको नम्बर मलाई थाहा छैन ।
४६. भण्डारीले पाइन्ट लगाउनु भएको थियो वा अन्य पोशाक लगाउन भएको थियो? पाइन्ट भए पेटी र बेल्ट लगाएको थियो थिएन? मोटरमा रहने बेल्ट को–कसले बाँधेको वा थिएन? साथै मदन भण्डारी चढेको यो मोटर अघिअघि कतै दुर्घटना भएको पनि थियो?
उहाँले पाइन्ट लगाउनुभएको थियो। उहाँ प्रायः पेटी लगाउनु हुँदैनथ्यो। सो दिन लगाउनुभयो, भएन थाहा भएन। गाडीमा भएको बेल्ट सो दिन सुनकोशी होटलसम्म कमरेड मदन र मैले लगाएको थियौं र सुनकोशी होटल पश्चात् मदन कमरेडले लगाउनुभएको थाहा छैन। सो बेल्ट मदनले आफैंले लगाउने र खोल्ने गर्न सक्नुहुन्थ्यो। सो जीप पहिला पनि मेरै हातबाट सामान्य दुर्घटनाहरु भएको हो। त्यसको अलावा तत्कालीन रापस विश्वबन्धु थापाको हातमा रहँदा पनि ठूलो दुर्घटना भएर वा पल्टिएर पुनः ओभरहल गरेको भन्ने सुनेको थिएँ।
४८. सवारी चलाउन कहिले सिक्नुभयो? नेकपा (एमाले) को गाडी चालक हुनुअगाडि अरु कसको गाडी कहिलेसम्म चलाउनु भयो? कति पढनु भएको छ? नेपाली भाषा बाहेक अरु भाषाको ज्ञान छ कि ?
४९. नागरिक छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा तपाईंले आफ्नो श्रीमतीलाई लेख्नुभएको चिठीमा आजभन्दा अगाडि भएका गल्तीहरु जे भए ती सबैलाई बिर्सिदेऊ भन्ने वाक्यांश परेको छ। त्यसको आशय के? लेख विवेचना कुनै पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने वा समाचार दिने काम गर्नुहुन्थ्यो ?
सोही विषय मदनलाई अवगत भएको हुँदाहुँदै पनि मैले २०५० बैसाखको अन्तिम दिन महाराजगञ्जमा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको घरमा उहाँलाई अवगत गराएको थिएँ। यसबारे उहाँको निर्देशन यस्तो थियो–
त्यतिमात्र नभई कुलेश्वर क्लबको नवौं वार्षिकोत्सवमा महाराजधिराजको ४७औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा कुलेश्वर क्लबद्वारा प्रकाशित बुलेटिनमा एक सान्दर्भिक र खोजपूर्ण ’आफ्नै समाजमा असुरक्षित छन् वादी जातिहरू’ साथै सोही बुलेटिनमा प्रकाशित सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठको शुभकामना सन्देश उहाँको मञ्जुरीमा उहाँकै सासंद लेटरप्याडमा मैले ड्राफ्ट गरेको थिएँ। यसका अलावा नेताहरूसँग पत्रिकाको लागि साक्षात्कार समेत गर्दथेँ। जनबल साप्ताहिकमा प्रकाशित पहिलो अंककै साक्षात्कार स्तम्भ मैले सुरु गरेको हो। यस कुरालाई अहिले साथीहरूले ढाकछोप गर्न सक्छन् तर यो वास्तविकता हो।
ट्रान्स सर्भिसबाट विदेशीहरुलाई लिएर जाँदा विदेशीसँग पार्टीको विषयमा कुरा गर्ने त परै जाओस् शैलेन्द्रजंग थापा र विजय श्रेष्ठले गाडीको डेस्क बोर्डमा टाँसिएको साविकको रुसको झण्डाको स्टिकर समेत ग्राहक भड्किन्छ भनी उप्काउन लगाउनुहुन्थ्यो। पार्टीको कुरा गर्नु त सवाल नै भएन ।
५१. एशिया फाउण्डेशनबाट कस्ता, जाइका र अष्ट्रेलियन एम्बेसीबाट कस्ता राष्ट्रियताका विदेशीहरुलाई ओसारपसार गर्नुभएको हो खुलाई दिनुहोस् ।
जाइकाबाट लगेका विदेशीहरु खानेपानीका जापानी इन्जिनियर हुन् भन्थे। अष्ट्रेलियन एम्बेसीबाट त्रिशूलीको टुप्चेस्थित आई क्याम्पका अष्ट्रेलियन डाक्टर हुन् भन्थे। एशिया फाउण्डेशनबाट उठाएको विदेशी कुन राष्ट्रको हो थाहा भएन ।
५२. नेकपा (एमाले) सँग तपाईको सम्बन्ध कस्तो छ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितसँग तपाई कहिले परिचित हुनु भयो? सम्बन्ध र घनिष्टता तपाईंको कस्तो थियो ?
महाधिवेशन र विचारको सवालमा ’म महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिएको थिएँ। २०४९ को माघ १४–२० मा सम्पन्न सो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा म कमरेड मदनको नवीन विचार जनताको बहुदलीय जनवादलाई प्रचारप्रसार र मत समेत दिएको हुँ।
५३. एमाले पार्टीमा चालकको रुपमा तपाईंले कहिलेबाट काम गर्नुभयो? कसले परिचय गरायो? मदन भण्डारी चढ्ने गरेको सो मोटर को कसले हाँक्ने गर्दथे? अरु ड्राइभर पनि थिए कि ?
५४. पार्टीको गाडी यो मात्र थियो कि? मदन भण्डारी गाडीमा बसेको अवस्थामा शैलेन्द्रजंग थापाबाट चलाएको बेला पनि कुनै दुर्घटना भएको छ कि ?
५५. दुर्घटनास्थलको सडक चाक्लो छ, त्यस्तो ठाउँमा दुर्घटना हुनु र आफू बच्नु, गाडी सडक छोडी गुडेपछि नेताद्वयलाई सतर्क नगराउनु, नदीमा बचाउने प्रयास नगर्नु, ड्राइभरी तलबले पुगेन भनी कतै कतै गुनासो गर्नु, बराबर सम्मेलन स्थलबाट बाहिर जान र मोटरमा चिनारीको लागि झण्डा राख्ने, यी सबै क्रियाले मदन भण्डारी, जीवराज आश्रितलाई हत्या गर्ने योजना पडयन्त्रमा प्रलोभनमा परी भएको हो भन्ने शंका र भनाई छ, कसो हो ?
दुर्घटना भन्ने विषय कहीं कतै पनि हुनसक्छ। त्यसमाथि पनि मिशिनरी चीजमा भर पर्ने कुरा। त्योभन्दा पनि अझ सामान्य र खुला सडकहरुमा पनि धेरै दुर्घटना भएको नजीर हामीसँग छ। सडकको विषयमा पछि सर्जमिनको लागि सो स्थलमा जाँदा आफू समेत आश्चर्यमा परें कि यति ठूलो ठाउँबाट कसरी दुर्घटना हुन पुग्यो? तर पनि उक्त स्थल केही अव्यवस्थित नै छ। नेताहरुलाई सजग नगराएको बारे माथि नै जवाफ दिइसकेको छु। मेरो आर्थिक अवस्था र पारिवारिक समस्याको कठिनाइबाट मैले मात्र नभई केन्द्रीय कार्यालयकै सम्पूर्ण स्टाफहरुबाट संयुक्त रुपले तलब वृद्धिको माग भएको हो। झण्डाको सवालमा कुनै अन्यथा चिनारी नभई पार्टीकै चिनारीको लागि प्रयोगमा ल्याएको हो। कुनै पड्यन्त्र र प्रलोभनमा म परेको छैन र पर्न सक्दिनँ पनि र यो कुराको जवाफ प्रश्नमै निहित छ कि त्यो शंका मात्र हो। शंका जोसुकैले जे पनि गर्न सक्छन्। जसले षड्यन्त्र र प्रलोभनका कुरा उठाइरहेका छन्, आजसम्म उनीहरु कसैबाट पनि ठोस प्रमाण ल्याउन सकेको छैन। षडयन्त्र र प्रलोभनमा परी श्रद्धेय नेताद्वय मदन–आश्रितको हत्या गर्यो कि भन्ने शंका मेरो हकमा धेरै टाढाको विपयवस्तु हो। उक्त काम मेरो तर्फबाट गर्न त परै जाओस् सोच्न र कल्पना समेत गर्न सक्दिनँ। यदि कसैले यसको पुष्टि गर्न सक्छ भने म जेल जीवन मात्र होइन, लाखौं जनताको बीचमा मृत्युवरण गर्न तयार छु। यसको साक्षी मेरो हस्ताक्षरयुक्त यही बयान हुनेछ।
५६. हम्फ्रेजको रगत जाँचको रिपोर्टमा मदन भण्डारीको रगतमा ट्रेसेज अफ आइसोप्रोपानल, आइसोबुटानल र डाइल्कोरोमिथेन, जीवराजको रगतमा आइसोबटानल, पेन्टानल र डाइक्लोरोमिथेन रहेको पाइन्छ र यी तत्वहरु मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि फोक्सोबाट स्वास प्रक्रियाबाट गएको भन्ने र त्यसको प्रभावले स्नायु प्रणालीलाई असर पुग्छ भन्ने छ, त्यसमा तपाईंको के भनाई छ ?
५७. आक्रमण गराई वा लठ्याउने औषधि वा विष प्रयोग गरी एवं भण्डारीको मृत देहलाई दासढुंगाभन्दा तल फाल्न लगाएको अन्यको भनाई पनि छ । यसमा तपाईंको के भनाई छ ?
शत प्रतिशत असत्य र कपोलकल्पित छ। त्यो काम मेरो सोचभन्दा धेरै टाढाको विषय हो। यो प्रश्नको सम्बन्धमा मलाई सुन्दा पनि दुःख र आश्चर्यचकित हुन्छ।
५८. तपाईले हाँकेको गाडीमा पेन्ट रिमुभर राखेको थियो वा यस्तै किसिमका अरू चिज थिए कि? वा गाडीबाट मैलो भएको हात धुनका लागि कुनै अरू पदार्थ राखेको थियो कि? खुलाई भन्नुहोस्। नेताद्वयको आफ्नै कोठा झ्यालमा रंगरोगन लगाएको थियो कि ?
मेरो श्रीमती गोमा लामा र छोरा अमित लामा छन्। काठमाडौंको मेरो तत्कालीन डेरा कानपा १४ नम्बर वडा कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा पर्दथ्यो। म जेल परेपछि मेरो परिवार संरक्षकविहीन भएर स्थायी घर तनहुँमा नै बस्दछन्। मेरो आर्थिक अवस्था नाजुक छ। म एक सामान्य किसानको छोरा हुँ। मेरो नाममा र मेरा दाजु भाई वा कसैको नाममा पनि एक घडेरी बराबर जग्गा पनि छैन। कृषि विकास बैंक रत्नपार्क काठमाडौंमा बचत खाता छ। सो खातामा हाल अन्दाजी १ हजार÷११ सय हुनुपर्छ । अन्त कतै बैंकमा खाता छैन ।
६०.तपाईलाई पैसा नपुगे कुनै विदेशी पोजेक्टमा लगाइदिन्छु भनी सिपी मैनालीले भन्नु भएको थियो थिएन? विदेशी प्रोजेक्ट कुन थियो? र सुनकोशी होटलबाट १०–१५ मिनेट लाग्नुपर्नेमा ३४–३५ मिने लागेको छ भन्ने छ कसो हो ?
६१. सुनकोशी होटलको ट्वाइलेटमा तपाई मात्र जानु भएको हो कि अरु पनि गएको हो? गएको भए को गए? त्यहाँ टवाइलेट छ भन्ने तपाइलाई जानकारी थियो कि? नारायणघाटबाट ट्रंकल गर्दा कति तिर्न भयो? र सुनकाशा होटलमा चियाको मोल कस्ले दियो ?
६२. तपाईं भरतपुर अस्पतालमा गएपछि घटना पछिको क्रममा मदनकुमार भण्डारीलाई भेट गराइदेऊ भनी बराबर भन्नु हुन्थ्यो भन्ने केहीको भनाई छ, कसो हो ?
सो समयमा हस्पिटलमा माथिका प्रश्न कसैसँग भने÷भनिनँ यकिन छैन। यद्यपि भनेतापनि मलाई के कसो भयो अथवा उहाँहरु पनि कतै निस्किहाल्नु भयो कि भनी नेताहरुप्रतिको श्रद्धा र सम्मानको कारण सो कुरा भनेँ होला ।
६३ तपाईको भन्नु पर्ने केही छ ?
६४. घटनास्थलमा ३ थुप्रो बालुवा बराबरी दूरीमा र भुसको थुप्रो अर्को ठाउँमा राखिएको देख्नुभयो÷भएन? सो चिनारी भन्दछन् कसो हो ?